Kusukela kwesobunxele nguDkt Jaclyn Mann, Dkt Clinton Veale, noDkt Samuel Iwarere.Click here for English version
Ithimba longoti bezempilo liyavumelana ngokuthi ukubhema kwandisa amathuba okuphathwa yi-COVID-19.Click here for English version
Ukudayisa ugwayi kukwehlise kakhulu ukubhebhetheka kwe-COVID-19, kanti kuzokwethula uhlelo lwezempilo umthwalo emahlombe.
Loku kutholwe yithimba longoti ebeliholwa nguSolwazi Mosa Moshabela wase-UKZN.
Leli thimba belikwi-Data@breakfast, isithangami sokuxhumana ngobuchwepheshe ebesihlelwe wuMoshabela, owungoti kwezempilo yomphakathi, lapho obekudingidwa khona indaba yokubhema ne-COVID-19.
Kubhekwe imiphumela yocwaningo lwe-Human Sciences Research Council (i-HSRC) kulesi sigcawu.
UMoshabela uthe ukuvala ugwayi kwenzelwe ukuvikela ababhemayo kwi-COVID-19 njengoba ubufakazi buveza ukuthi basengcupheni enkulu yokutheleleka ukwedlula abantu abangabhemi ngokufinyelela esigabeni esibucayi sokugula. Uthe ukuvalwa kukagwayi kuzosiza ukwehlisa isibalo sokutheleleka.
Ucwaningo luveze ukuthi ngenkathi ugwayi uqhubeka nokudayiswa iningi lababhemayo belingakwazi ukuwuthola, okwenze kwehla ukubhebhetheka kobhubhane.
‘Iningi lababhemayo (abangamaphesenti angama-88) belingakwazi ukuthenga ugwayi ngesikhathi somgonqo, okusho ukuthi ukuvalwa kukagwayi kuphumelele ekunciphiseni ukutholakala nokubhenywa kwawo,’ kusho usomininingwane wase-HSRC, uDkt Ronal Sewpaul.
Ethula imininingwane eqoqwe ngesikhathi esingamasonto amabili kwababhemayo ezweni lonke, u-Sewpaul uthe uma kubhekwa imiphumela yocwaningo, abathenga ugwayi bebesondelene nabanye abantu okungesibona abasemakubo ngaphezu kwababhemayo, okusho ukusondelana, okungenye yezinto ezimqoka ezibhekwayo ekugwemeni ukusabalala kwegciwane.
Labo abakwazile ukuthenga ugwayi ngesikhathi sokuvalwa kwawo bebesethubeni elikhulu lokuhlangana nabantu okungesibona abasemakhaya abo ngethuba elingamaphesenti angama-26 ngamaphesenti ayi-10 kunabanye. Labo abaqhubekayo ukuthenga ugwayi nabo bahlangane nabantu abayi-10 okungesibona abasemakubo uma kuqhathaniswa nalabo abangazange,’ kusho u-Sewpaul.
Uma kubhekwa ukuthi ababhemayo baguliswa yi-COVID-19 kakhulu kunabangabhemi, kudingeka ukuthi baqikelele kakhulu ingcuphe abangaba kuyona uma kungenzeka baguliswe yigciwane.
‘Uma iphesenti ezigidini eziyisishiyagalombili zabantu ababhemayo eNingizimu Afrika bengatheleleka ngegciwane, abayizi-80 000 bangagula,’ kusho u-Sewpaul. ‘Kulinganiswa ukuthi amaphesenti amahlanu ababhemayo abane-COVID-19 kungadingeka bangeniswe egunjini labagula kakhulu. Loku kungasho ukuthi abantu abangama-4000 bangadinga imibhede yasegunjini labagula kakhulu nemishini yokuphefumula, kubeke engcupheni abasebenzi bezempilo.’
U-Sewpaul uthe imiphumela yocwaningo iveze ukuthi ukuvumela ukubhema ngale nkathi kuzokwandisa ukungaqhelelani, kuthwalise kanzima isimo sezempilo.
UMqondisi oMkhulu we-National Council Against Smoking uDkt Yusuf Saloojee, uthe labo ababambelele ekutheni usubangene egazini ugwayi akusona isizathu esinqala esingaphoqa uhulumeni ukuthi uvumele ukudayiswa kukagwayi ngesikhathi sobhubhane. ‘Ababhemayo bangagula kakhulu kunabanye, okungathwalisa ezempilo kanzima,’ kusho yena. Ukhuthaze ababhemayo ukuthi basebenzise isikhathi sokuvalwa kokudayiswa kukagwayi ukuthi bawuyeke.
Lesi sithangami sokuxhumana ngobuchwepheshe ungasibuka ku: https://www.youtube.com/watch?v=BJTiDgNpaWs&feature=youtu.be
USolwazi u-Fatima Suleman waseMkhakheni wezeSayensi yezeMithi e-UKZN.Click here for English version
Amazwe ase-Afrika kudingeka ukuthi abheke indaba yokuqala uhlelo lokuhlola imithi yokwelapha ukuqinisekisa ukuthi iziguli zawo ze-COVID-19 ezilashwa nge-chloroquine ne-hydroxychloroquine zivikelekile ekugulisweni yimiphumela engemihle yale mithi.
Loku kushiwo nguSolwazi Fatima Suleman, uSolwazi eMkhakheni WezeSayensi YezeMithi nowake wayi-Prince Claus Chair of Development and Equity e-Utrecht University
U-Suleman waba neqhaza ephepheni locwaningo olwashicilelwa kwi-American Society of Tropical Medicine and Hygiene, osihloko salo sithi: Chloroquine and Hydroxychloroquine for the Prevention or Treatment of Novel Coronavirus Disease (COVID-19) in Africa: Caution for Inappropriate Off-Label Use in Healthcare Settings.
Leli phepha locwaningo lwaluthinta udaba lobungozi bemithi ekwelashweni kweziguli ezingalaphekanga ngaleyo mithi. Leyo mithi ivame ukusetshenziswa ukwelapha iziguli ezinezifo ezingamahlalakhona njengesifo samathambo i-rheumatoid nezifo lapho izicubu zomzimba zizidlavaza zona khona. Ukuthengwa ubuthaphuthaphu kwemithi engelapha i-COVID-19 sekuholelele ekutheni emhlabeni kube nokushoda kwemithi yokwelapha kwabaphila ngayo.
USolwazi Jean Nachega abhale naye iphepha locwaningo uthe: ‘Ukusetshenziswa kwe-chloroquine noma i-hydroxychloroquine okungabhaliwe kungenza inhliziyo ishaye ngamandla, ibe nobuthi uma umuthi usetshenziswa wodwa noma uhlanganiswa neminye. Ukuhlangana kwe-chloroquine noma i-hydroxychloroquine nemithi evame ukwelapha izifo ezivamile e-Afrika njengesandulelangculazi nofuba nako kungenza ukuthi imithi ingasebenzi noma igulise oyisebenzisayo.
U-Suleman uthe ithimba lababhali bocwaningo belilwa impi yokuthi osokhemisi kufanele bakhiphe kuphela imithi ebhaliwe ukuthi yenzani. ‘Uma odokotela bebhalela iziguli lemithi kufanele babe nendlela yokuhlola uma isizigulisa noma inemiphumela engemihle. Njengoba zingakabi khona izindlela ezaziwayo zokwelapha i-COVID-19, odokotela kufanele bahambisane nemibhalo yocwaningo ukuhlola imiphumela kweminye imikhakha namanye amazwe ukuze kuthi uma kutholakala imiphumela engemihle bese ishicilelwa ukuze loko kwelapha kuzomiswa ngokushesha kwezinye iziguli,’ kusho u-Suleman.
U-Suleman ulwela indaba yezigcawu zokuxhumanna ngokobuchwepheshe e-Afrika ukufundisa abantu ngemiphumela engemihle yokusetshenziswa kwaleyo mithi, ikakhulukazi ngale kokubhekwa wodokotela. Ugcizelele isidingo ‘sokusebenza ngokubambisana’ e-Afrika ukuqinisekisa ukukhiqizwa nokusatshalaliswa kwezindlela zokuhlola ikhambi elisemthethweni le-COVID-19 ngendlela engabizi yokulisabalalisa.
USolwazi u-Carol Bertram uqokelwe ukuba nguMhleli we-Journal of Education.Click here for English version
USolwazi eSikoleni sezeMfundo, USolwazi u-Carol Bertram, uqokelwe esikhundleni sokuba ngumHleli we-Journal of Education ehlonishwayo ye-SA Education Research Association.
Umsebenzi omkhulu ka-Bertram ukusimamisa i-Journal endleleni ezokwamukela izindaba ngocwaningo ngendlela evulelekile emphakathini.
‘Sisebenzisa uhlelo lobuchwepheshe oluvuleleke emphakathini olubizwa nge-Open Journal System esetshenziswa yi-UKZN,’ kusho yena. ‘Nginentshisekelo ngobumqoka bokwenza ukuthi izindaba ngocwaningo zitholakale futhi zivuleleke kuwona umuntu, zingavaleleki ngama- paywall. Umsebenzi wokushicilela amabhuku ocwaningo ezemfundo ephakeme umsebenzi ongenisa izindodla zamarandi, lapho abashicileli bethatha khona umsebenzi wabacwaningi (amaholo abo akhokhelwa ngemali yomphakathi), bathole amagunya awo bese bewudayisela izikhungo zemfundo ephakeme ngemali eshisiwe.’
Isifiso sakhe njengomhleli ukulawula ibhuku lezinga eliphezulu ngaphandle kwenzuzo, likhokhise imali engabizi yokushicilela izindaba kuthi ubunikazi bodaba buqhubeke nokuba ngobombhali walo bese kuthi udaba oluyi-PDF lutholwe uwonkewonke kwi-inthanethi.
‘Ngiyaziqhenya ukuthi i-Journal of Education ihlelwa ngokohlelo lwe-Scientific Electronic Library Online (i-SciELO SA), okusho ukuthi iyahambisana nemigomo eminingi ngokwezinga,’ kusho u-Bertram. ‘I-Journal ihlelwa futhi ngokwe-Directory of Open Access Journals -(iDOAJ), okuyindlela ehlela izinto ezishicilelwayo kwi-inthanethi yokuthi ulwazi lutholwe nguwonkewonke emabhukwini anamaphepha ocwaningo abuyekezwe abasemkhakheni ofanayo. Ngibonga ikakhulu u-Faith Magwaza woMtapo wolwazi wase-UKZN ozinikele ekushicileleni izinto zikawonkewonke ne-Scholarly Publishing Programme e-Academy of Science of South Africa, enabasebenzi abahle abazinikele ekwesekeni umsebenzi wokushicilela kawonkewonke eNingizimu Afrika!’ kwengeza u-Bertram.
Leli bhuku litholakala ku: https://journals.ukzn.ac.za/index.php/joe